I-China High-Tech Fair 2016
I-CHTF (China High-Tech Fair) iyi-International Trade Fair ye-elekthronikhi kanye nobunjiniyela bogesi. Futhi i-Fair yenzeka kanye ngonyaka kuCon ...
I-CHTF (China High-Tech Fair) iyi-International Trade Fair ye-elekthronikhi kanye nobunjiniyela bogesi. Futhi i-Fair yenzeka kanye ngonyaka emhlanganweni kanye nasesikhungweni sokubukisa eShenzhen. I-Fair iyi-fair ephezulu yobuchwepheshe obuphakeme eChina.
I-CHTF ihlala kusukela ngomhlaka 16 Novemba kuya ku-21. Abantu abavela emazweni angama-50 babuthana ndawonye ukushintshana ubuchwepheshe bamuva, imiqondo nezixazululo embonini kagesi. I-Fair futhi igxile kubuchwepheshe obuthuthukile nemikhiqizo emikhakheni yokonga amandla, ukuvikelwa kwemvelo, ukukhiqizwa kwemishini ephezulu, amandla amasha nezinto zokwakha.
Futhi i-fair yimali kagesi kagesi kahle. Bangathola imikhiqizo emisha. Kunezindawo eziningi zokuhlangenwe nakho ezinjengemikhiqizo ye-VR ne-AR.
Sithole ne-robhothi elihlakaniphile kulungile. Bangakwazi ukubheka izingane zakho uma ungekho ekhaya. Bangalandela izingane, bacule izingoma, bakhulume izindaba futhi badume nabazali babo uma kunesidingo. Futhi nathi sabona izinto eziningi ezihlakaniphile zasekhaya. Singacabanga ukuthi impilo izoba lula kakhulu futhi ibe lula kakhulu ngokuzayo. Futhi lolu hlobo lwezinto lusikhumbuza ukuthi sicabange ukuthi yini esingayenza abantu esikhathini esizayo. Izinto ezibaluleke kakhulu esizibonayo, ngicabanga, yimikhiqizo yezemvelo. Njengoba ubuchwepheshe buthuthuka, kwesinye isikhathi kufanele sinciphise futhi sicabange ngezinto zokuvikela imvelo esikhundleni salokho. Kwangathi ikusasa liyikusasa elihle.
PHAMBI I-Drone Security System-Monitor indlu yakho kuwo wonke ama-angle
Ungawabeka kuphi amakhamera we-IP ezokuphepha? OLANDELAYO